कांग्रेस महाधिवेशनको समीक्षा
काठमाडाैं | पुस ६, २०७८
डा. चन्द्र भण्डारी
डा. भण्डारी नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।
कांग्रेसको महाधिवेशनको समीक्षा गर्नुपूर्व राजनीति र देशको अवस्थाबारे केही कुरा गरौं । मेरो देश प्राकृतिक रूपले धेरै नै सुन्दर देश छ । देश हाँक्ने व्यक्ति दूरदर्शी हुँदा अरबका मरुभूमि स्वर्ग बन्दो रहेछ । हिउँ नै हिउँको युरोप पनि स्वर्ग बन्दोरहेछ । यति सुन्दर प्रकृतिको उपहार हाम्रो देश कहिल्यै विकसित भएन ।
यति स्रोत साधन भएको देश, यति राम्रो क्लाइमेट भएको देशका जनताहरू अमेरिका र युरोपको भिसा पाउनका लागि नागरिकता छाड्न राजी हुनुपर्ने स्थिति छ । देशमा गरीबी अत्यन्त बढ्यो । विकास सन्तुलित भएन । हामीले बनाएका सडक मान्छे मार्ने धराप जस्ता भए । नेपालको भू–बनोट अनुसारको विकास हुन सकेन ।
प्रकृतिक स्रोत साधनसँग नेपाली जनतालाई जोड्न सकिएन । ग्लोबल भिलेजमा आफ्नो संस्कृतिलाई कसरी जोड्दै जाने भन्ने सोच नहुँदा अहिलेको नेतृत्व, जो २०४६ सालबाट हामीले देख्दै आइरहेका छौं, उसले जनताका आशा अपेक्षा पूरा गर्न सकेन । विकासले गति लिन सकेन ।
राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको निष्कर्षसाथ चार वर्षअघि कांग्रेसका केही युवा साथीहरूलाई बोलाएर मैले भनें– वर्तमान नेतृत्वको कारणले नेपालको विकास गर्न अवसर पाएनौं । तिमीहरूले केही गर्ने कि मेरोजस्तो कपाल मात्र फुलाउने ? त्यसपछि बीपीको मेलमिलापको दिन एउटा वक्तव्य जारी गरेर यो अभियान शुरू गरेका थियौं ।
त्यो बेला नै १४ औं अधिवेशन हाम्रो सम्झौता हो, १५ औं महाधिवेशन हाम्रो नेतृत्व हो भनेर भनेका थियौ । यो अभियान शुरू गर्दा धेरै पुराना नेताहरू रिसाउनुभयो । उहाँहरू हामीसँग हिँड्न सक्नु भएन । तर, हाम्रो राजनीतिक अभियानले गति लिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको यो अधिवेशनले अप्ठ्यरोमा परेको नेपालको राजनीतिलाई एउटा सकारात्मक सन्देश र दिशानिर्देश गरेको छ । राजनीति भन्नेबित्तिकै घृणा गर्ने गरेको अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वमा एउटा नयाँ जेनेरेसनले प्रतिनिधित्व गर्‍यो । शेरबहादुर देउवा जस्तो ८० पुग्न लागेको नेता पनि यसमा अट्नु भयो । युवा नेताहरू पनि समावेश भए ।
यसर्थ निराशातर्फ जाँदै गरेको नेपालको राजनीतिलाई कांग्रेसको महाधिवेशनले इन्जेक्सनको काम गर्‍यो । राष्ट्र निर्माणका अवयवहरू विकसित हुने क्रममा नेपालमा अब यो जेनेरेसनले पार्टीलाई सही दिशामा लैजाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हामीले एउटा अभियान चलायौं कि पार्टीहरू सुध्रिए भने नेपालको राजनीति सुध्रिन्छ । राजनीति सुध्रियो भने नेतृत्वमा सही मान्छे आउँछ भन्ने हाम्रो अभियान हो । यसले धेरै सफलता हासिल गरेको छ ।
कांग्रेसभित्रको प्रगतिशलील अलायन्सको भविष्य
कांग्रेसको पुनर्जागरणका लागि डा. शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको यो प्यानल कायमै रहन्छ । नेपालमा नयाँ जेनेरेसनको भविष्य छ । कांग्रेस कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउन राष्ट्रका लागि जुन टीम बनाएका थियौं, त्यसमा केही साथीहरू छुट्नु भएको छ । १४ औं अधिवेशनको समाप्ति १५ औं अधिवेशनको शुरूवात हो । त्यो अभियानमा म लागिसकेको छु । हामी लागिसकेका छौं । हाम्रा साथीहरू लागिसक्नु भएको छ ।
यही टीमले मात्र नेपालको राजनीतिमा आशा जगाउन सक्छ । कम्युनिस्टहरूमा आएको निराशा र विखण्डन कांग्रेसका लागि अवसर पनि हो ।
आफ्नो सरकार गिराउन कम्युनिस्टहरूजे जे जस्ता खेल खेले त्यसबाट हामी (कांग्रेस)मा जरुर आशा त पलाएको छ नि ! त्यसकारण कांग्रेसको भविष्य उज्ज्वल छ । १४ औं अधिवेशनसम्म शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल समूहको कुरा आयो । १५ औं महाधिवेशनमा देउवा, कोइराला प्यानल नभई नयाँ फ्युजन हुन्छ ।
१५ औं महाधिवेशनले नयाँ व्यक्ति र समूहलाई नेतृत्वमा लैजान्छ । कांग्र्रेसमा नयाँ नेतृत्व आउनु प्राकृतिक रूपमा आवश्यक र सत्य पनि हुन्छ ।
देउवाले गगनलाई बदल्लान् कि गगनले देउवालाई ?
शेरबहादुर देउवा नेपालका नेतामध्ये अत्यन्तै भाग्यमानी व्यक्ति पनि हो, किनभने हाम्रो पाठशालाका युवाहरू चाहे शेरबहादुरले प्रतिनिधिका रूपमा उठाएको व्यक्ति होस्, चाहे धनराजजी र गगन हाम्रो समूहबाट उठेका हुन्, चाहे प्रकाशमानजीको प्यानलबाट उठेका विश्वप्रकाश हुन्, अत्यन्त शार्प माइन्डेड युवा हुन् । अहिले देउवाको टीममा पुगेका छन् । अर्कोपटक उनीहरूलाई सँगै लिएर हिँड्नु पर्नेछ ।
शेरबहादुर देउवाले हेर्नुपर्ने ‘ट्रान्सफर्मेसन अफ माइन्ड’ र ‘टान्सफर्मेसन’ अफ सोसाइटी हो । अहिले शेरबहादुरजी असफल हुनुभएको कारण माइन्डलाई टान्सफर्मेसन गर्न नसकेकाले हो । अवसर पाएर पनि सक्नुभएन । रूपान्तरण गर्न सक्नुभएन, किनभने उहाँसँग पुरानत सोच राख्ने (ट्रेडिसनल) मान्छेको झुण्ड थियो । तर अहिले उहाँले अवसर पाउनुभएको छ । विश्वको इतिहासमा सीमित व्यक्तिले मात्र बारबार यस्तो अवसर पाउने गर्छन् ।
८० पुग्न लागेको सभापतिले भर्खरका योङहरू (नेपालको कन्टेक्स्टमा भनेको, विदेशमा त यो उमेर समूह प्रधानमन्त्री भइसकेको छ) पाउनुभएको छ । देउवाजीले यो जेनरेसनसित सहकार्य गरे मुलुकले उज्यालो भविष्य पाउछ ।
राजनीतिक कोर्ष चेन्ज या अर्ली इलेक्सन ?
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तनका लागि भएको महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई चलायमान बनाए पनि अहिले नै कोर्ष करेक्सनमा जाँदैन । राजनीतिलाई यति धेरै असर गर्दैन ।
नेपाली जनतामा नेपालको विकासमा, शिक्षा स्वास्थ्य र पहिचानमा के प्रभाव पर्छ ? जस्तोसुकै ठूला कुरा गरे पनि नेपालको राजनीति नेताले आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाए । पार्टीहरू पनि स्थायी हुन सकेनन् । यो राजनीतिलाई देशसित, विकाससित जोडेर गयौं भने यसले एउटा निकास दिन्छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा केही फेरबदल आउँदैन । यसलाई मजबुत गर्दै बलियो बनाउछौं ।
अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई लिएर सत्ता गठबन्धन ढल्छ कि भन्ने खालका टिप्पणी पनि सुनिन्छन् ।
नेपालका हरेक मुद्दा व्यक्ति र स्वार्थ केन्द्रित छन् । वास्तवमा सबै कुरा राष्ट्रकेन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्रलाई हित हुने कुरा गर्नुपर्छ । एमसीसीलाई यहाँसम्म ल्याउनमा केपी ओली, प्रचण्डजी, झलनाथजी, माधव नेपालजी, बाबुरामजी लगायत‘जी’हरू हुनुहुन्छ, सबै इन्भल्ब हुनुहुन्छ । सडकमा एउटा कुरा भित्र अर्को कुरा गर्नु भएन । राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ भने एमसीसी अनुमोदन गरुन्, हुँदैन भने नगरुन् ।
देशव्यापी रूपमा कांग्रेसको लहर
मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालनमा कम्युनिस्टहरूको असफलतासँगै कांग्रेसको पक्षमा देशभर माहोल सिर्जना भएको छ । कांग्रेसको पक्षमा देखिएको अपार जन समर्थनलाई कसरी क्यास गर्ने भन्ने सबै कुरा शेरबहादुरजीको हातमा छ । पार्टी सञ्चालनका लागि हाम्रो पाठशालाबाट हामीले अत्यन्त योग्य र सक्षम पुस्ता देउवालाई पठाएका छौं ।
पाँच–पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, दुईपटक सभापति भइसकेको मान्छे, फेरि पनि गुटमा बस्ने कि सिंगो पार्टीको नेता बन्ने भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने उपयुक्त समय आएको छ ।
कांग्रेसमा उदाएको सिंगो जेनेरेसनलाई लिएर जाने/नजाने जिम्मा उहाँको हातमा छ । आगामी चुनावमा कांग्रेसको विजय पराजयमा शेरबहादुरजीको मुख्य हात हुन्छ । हाम्रो विचार समूह गुट–उपगुट र भागबण्डामा लाग्दैनौ । तर कांग्रेसभित्र योग्यले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने दबाबमा हामी लाग्छौं । शेरबहादुरजी कहाँ उभिनुहुन्छ, त्यसमै कांग्रेसको भविष्य जोडिन्छ ।
कांग्रेसबाहेक जनतासामु विकल्प पनि छैन । गत चुनावमा जनताले नेकपालाई भोट दिएकै हुन् । उनीहरू कुकुर बिरालो जस्तै मारामार गरेर पार्टी फुटाएपछि कांग्रेसप्रति जनताको भरोसा बढेको छ । कांग्रेसमा नयाँ र युवा नेतृत्व आएको छ भनेर पनि आशा बढेको छ ।
(नेता भण्डारीसँग लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)
नेकपा एमालेको पोलिटब्यूरो एवं केन्द्रीय कमिटी सदस्य अरुण नेपाल बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री भइसकेका नेता हुन् । एमालेमा यसअघि माधव नेपाल समूहमा रहेका उनले पार्टी विभाजनको समयमा उनल...